တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: သုံးနှစ် … သုံးမိုး
Posted by မေဓာဝီ at 5:27 AM
သုံးနှစ်က မြန်ပေမယ့် အဲဒီအချိန်ထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အမှတ်ရစရာတွေက နည်းတာမဟုတ်ဘူးနော် အမရေ။ အမရေးတာ အမြဲဖတ်လို့ကောင်းလို့ ရေးတာတော့ ဘယ်တော့မှ မရပ်စေချင်ပါဘူး။ ဘလော့လေးနဲ့အမ သုံးနှစ်သုံးမိုးကနေ ရာသက်ပန် လက်တွဲသွားနိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။း)
8/30/2009 6:14 AM
သုံးနှစ်တောင် ရှိခဲ့ပီလား အမရေ..
အမရဲ့ စာကောင်းပေကောင်းတွေ မျှော်နေပါတယ်..
ဘာတွေဖြစ်လို့ပါလိမ့်.. လူကြီးတွေလွှမ်းမိုးမှုအောက်ကတော့ သေမှပဲ လွတ်မြောက်မယ်ထင်ပါတယ်..
ပြီးတော့ ဘလော့ဂ်အပေါ်စွဲလမ်းမှုကလည်း တော်တန်ရုံမှမဟုတ်ဘဲ။ ဘ၀လက်တွဲဖော်လေးကို လွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ခက်ခက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဖြုတ်မချပါနဲ့လား။ ဘယ်သူတွေက ဘာတွေပြောပြီး ဘာတွေချုပ်ချယ်လို့လဲဟင်.. စိတ်မကောင်းဘူးဖတ်ရတာလည်း...
၃နှစ်ပြည့်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ုဆုတောင်းပါတယ်။ အေးအေးချမ်းချမ်း ဆက်လက်ပြီး ဝေမျှရေးသားနိုင်ပါစေ..
8/30/2009 6:46 AM
မမေရေ..ဒီဘလော့ကြောင့်ပဲ..ကျမတို့တွေ.. တယောက်နဲ့ တယောက် ဖတ်တတ်ကြ.. နားလည်ခဲ့ကြ.. နွေးထွေးခဲ့ကြ..( အေးစက်ခဲ့ကြ) ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..ရေးချင်..ရေးနိုင်နေသရွေ့တော့..ကျမတို့အားလုံးရဲ့.. ချစ်သူလေးတွေပါပဲ.. မရှိလဲကောင်း..ရှိလဲကောင်းပေါ့လေ..
ဆက်လက်..-- နှစ်-- မိုး နိုင်ပါစေ..း))
မေဓာဝီရေ့ ကျနော်ကတော့ ခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင် ချစ်သူတစ်ယောက်ကို ရဖို့ ကျိုးစားခဲ့ဖူးတယ် သိလား။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ တွဲရခါနီးမှာ မထင်မှတ်ပဲ ခွဲခဲ့ရတယ်။ ထားလိုက်ပါတော့လေ။ မေဓာဝီရဲ့ သုံးနှစ်ပြည့်ဘလောဂ်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ စာကောင်းလေးတွေ ထာဝစဉ်မျှော်လင့်နေကြောင်းပါ။
သုံးနှစ်ဆိုတာ (၂၀)တို့ (၂၁)တို့မှ မဟုတ်တာ။
ဆက်လက်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ရေးနိုင်ပါစေလို့
ဆုတောင်းပါတယ်ဗျို့ ... ကွေကွင်းသွားတဲ့ သူနဲ့
ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ စာပွဲဝိုင်း ဆီကို တက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်... :P ။
၀ါးးးးးးး အားကျပါတယ် အမရေ
နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ စာပေကောင်းများရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်
၃နှစ်တောင်ရှိပြီပဲ။ ဘာမှ စဉ်းစားမနေနဲ့၊ ကပ်လိုက် ခွာလိုက်လုပ်မနေနဲ့။ လူကြီးတွေသဘောမတူဘူး ဘာဘူး စဉ်းစားမနေနဲ့။ ယူသာ ယူလိုက်တော့ .... ယောင်္ကျား...အဲ့လေ.... ဘလော့ဆက်ရေးလို့ပြောတာ
သုံးနှစ်သုံးမိုးများ ဟယ်ရီတို့က ပျင်းတောင် ပျင်းသေး ...
တို့များဆို ၈-နှစ်တိတိ စောင့်ခဲ့ဖူးတယ် ... ဟဲဟဲ
ကျေးဇူး မမေရေ ... အကြွေးဆပ်လို့ .
(ကြွေးရှိပြေးမှာ ... ပြေးမိပြေးရာ လုပ်စရာ မလိုတော့ ပါဘူး ... :P)
8/30/2009 12:19 PM
ဆရာ မောင်သာရ က ပုတီးကုန်းမောင်စိန်ဝင်း ကို ပြောဖူးတယ်။ ဆရာဝန်တို့ အင်ဂျင်နီယာတို့ဆိုတာ ကျောင်းရှိတယ်။ တနှစ်ကို ဘယ်နှစ်ယောက် ဆရာဝန် ဖြစ်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်တယ်။ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာ ဆရာဆိုတာကျတော့ ကျောင်းလည်း မရှိ၊ လူတိုင်းလည်း ဖြစ်မလာနိုင်တာမို့ ပုတီးကုန်း မောင်စိန်ဝင်း အနေနဲ့ အင်ဂျင်နီယာ ဘ၀ကို စွန့်ပြီး စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ကြီး ခံယူ လိုက်ပါလို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုလည်း လူတိုင်း ဖြစ်မလာနိုင်တဲ့ ဘလော့ဂါ ဘ၀ကို မေဓာဝီ တယောက် ပျော်ပျော်ကြီး ခံယူနိုင်ပါစေသား။ ...။
၃ နှစ် ၃ မိုး လက်တွဲလာခဲ့တဲ့ ဘလော့လေးနဲ့ ဆက်လက်ပြီး အေးအတူပူအမျှ ရာသက်ပန် ပေါင်းသင်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ.. လို့
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိပြီး ဒီဘလော့ဂ်ကို အလည်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ရေးသားတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ပဲ ပုဂ္ဂလိက အမြင်နဲ့ မြင်မိပါတယ်။
မရပ်ပါနဲ့မမေဓါဝီ
၃ နှစ်မှသည် နှစ် ၁၂၀ တိုင်စေသောဝ်
ကျမဘလော့လေးကို လာရောက်ဖတ်ရှုကြသူများ၊ ဆက်လက်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းသူ၊ အားပေးကြသူများ၊ ဆုတောင်းပေးကြသူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဆက်ရေးဖြစ်အောင် ကျမ ကြိုးစားပါ့မယ်။
ဒီဘလော့ဂ်လေးကို သိရတာမကြာသေးပေမယ့် တွေ့တွေ့ချင်းပဲ ဘလော့ဂ်ကောင်းလေးတခု ဆိုတာ သိရလိုက်ရပြီး အားတဲ့အချိန် ပြန်လာဖတ်ဖို့ အမြဲစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ သုံးနှစ်သုံးမိုး ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက သက်သေပြနေပြီပဲ ခွာဖို့ကို အားမပေးပါဘူး ပေါင်းဖို့ကိုပဲ အားပေးပါတယ်။ စာကောင်းကောင်းလေးတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
8/30/2009 7:31 PM
စာရေးကောင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရော၊ သိသင့်သိထိုက်တဲ့အရာလေးတွေ… ကောင်းရာမွန်ရာလေးတွေကို အမြဲစေတနာသန့်သန့်နဲ့ မျှဝေချင်တဲ့စိတ် ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရော…. ဆက်ရေးပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဘလော့ဂ် ပြာပြာလေးကို ၀မ်းသာအားရ လာကြိုဆိုသွားတယ်
ပန်ဒိုရာညွှန်းထားလို့ ရောက်အောင်လာခါမှ "ပြာလွင်လွင်ရင်ခွင်ရိုင်း" ဘလော့နဲ့ တိုးနေတယ်...
အိမ်အသစ်ကို ဖိတ်လဲ မဖတ်ဘူး...
ဆက်လုပ်ဗျိုး. လုံးဝလက်တွဲမဖြုတ်ကြေးပေါ့ မမမေရဲ့
မေရေ… Love is Blueတဲ့… ဒါဆို ဘလော့လေးနဲ့ လက်တွဲလိုက်ပြီပေါ့… အမတို့ တုန်းက ၅နှစ်၅မိုးစောင့်ခဲ့ရတာ… ရှေ့ သာဆက်တိုး…(အိမ်ကကြားရင် မြှောက်ပေးတယ်ဆို စိတ်ဆိုးနေကြလိမ့်မယ်)… ဟုတ်ပါရဲ့နော်… မေ့ဘလော့လေးက မေ့ဘ၀ တစိတ်တပိုင်းပါပဲ… မေရေ… စာရေးခြင်းဆိုတာ ကောင်းသောအလုပ်လုပ်တာပဲမေရယ်… မေ့လို အနုပညာဝမ်းစာ ပြည့်ဝတဲ့ သူတယောက်ရဲ့ စာတွေက စာဖတ်သူကို အမြဲသုတ၊ ရသ စုံလင်စွာရစေတာမို့ပိုလို့ တောင် အဓိပ္မါယ်ပြည့်ဝသေးတယ်လေ… မေနဲ့ ဘလော့လေး ပေါင်းဖက်စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်တယ်နော်… ဘလော့နှစ်တရာတိုင်ပါစေလို့ …
oh, I was worried that you were going to stop writing. Glad to know that you are going to carry on. I love your writing.. I found out about your blog may beayear or so ago. I went back and read each and every post.
Congratulations on your 3rd anniversary and wishing you all the best.
9/01/2009 7:13 AM
Forgot to mention in my last comment. The new design is good. but I like the "see mee khwet" icon and saying from the old one. It has deep meaning. :)
9/01/2009 7:15 AM
မမေအရေးအသားက သုံးနှစ်ထက် အများကြီး ၀ါရင့်ပါတယ်။ အချင်းချင်းမြှောက်သလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ မလေးရပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ချစ်သူတွေ သုံးနှစ်သုံးမိုး စောင့်ခဲ့ကြသလို မမေလည်း ဘလော့ဂ်လေးနဲ့ သုံးနှစ်သုံးမိုး ရင်းနှီးခဲ့ပေမယ့် ပိုးပုဝါ လက်တကမ်းမှာပဲ နေ,နေရတုန်းဆိုတာ ဒီအမှတ်တရ ပို့စ်လေးမှာ တွေ့လိုက်ရတယ်...၊ အားပြိုင်မှုတွေ အများကြီးကို ရင်စည်းခံပြီးမှ ဘလော့ဂ်လေးကို အသက်ဆက်ခဲ့ရတာ တကယ်ပဲ ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ..၊ သုံးနှစ်ပြည့်မှသည် ... ဘာညာတော့ မရေးတော့ဘူး၊ ကျနော်က ငါးနှစ်ပြည့် ပို့စ်ကို အခုလေးတင် ဖတ်ပြီးမှ ဒီကိုလာဖတ်တာ ဆိုတော့ ဒါဟာ နောက်ဆုံးပို့စ် မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ သိနေလို့ပါ...။း)
8/31/2011 8:47 AM